15 Faa'iido Safar Faa'iido leh oo loo adeegsado iPhone iyo iPod touch
Liiskaan waxaa ugu dambeyntii la cusbooneysiiyay January 23, 2015 waxaana loogu talagalay oo kaliya loogu talagalay dadka isticmaala iPhone iyo iPod touch iOS 8 ama ka sareeya.
Maaddaama fidinta taraafikada ay sii wadi karto in ay soo saarto wareegga mobile, horumariyayaal badan ayaa ku jira iyaga oo leh barnaamijyadooda iOS . Inkasta oo dadka isticmaala desktop ay raadin karaan kumanaan ka mid ah isku-duba-ridka adoo adeegsanaya Web-ka, helitaanka barnaamijyo mobile-ka ah oo ku-kordhinaya Safari-kordhin waxay noqon kartaa mid khaldan.
Si kastaba ha ahaatee, waxeynnu fududeynay, si kastaba ha noqotee, adoo taxaya qaar ka mid ah doorashooyinka ugu fiican.
Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Safari ee Safari ee iOS, oo ay ku jiraan sida loo kiciyo iyo u maareeyo, booqo anagoo si qoto dheer u eegno: Sida loo Isticmaalo Safari Safari on iPhone ama iPod taabasho
Qalabka maaraynta mashaariicda mashruuca ayaa isku dhafay Safari oo loogu talagalay Ikhtiyaarka Faafinta Iskuduwaha, oo laga helay qaybta ugu horeysa ee waraaqaha Share-ka ee shabakadda. Ilaa iyo inta aad horey u xaqiijisay barnaamijka Asana, doorashadan kordhintaan waxay kuu ogolaaneysaa inaad abuurto hawl cusub oo ku saabsan content-kaaga oo aad hadda daawaneyso. Ma jiraan wax loo baahan yahay in la bedelo barnaamijyada si dhakhso ah ugu daraan maqaal, URL ama qayb ka mid ah mashruuca jira. More »
Faahfaahin dheeraad ah oo la socota barnaamijka mashiinka raadinta ee Microsoft, BingTranser wuxuu u rogaa bogga Webka ee firfircoon luqadda aad doorbidayso - khidmadda Ingiriisiga. Inta lagu jiro tarjumaad, tilmaame horu-mar ah ayaa lagu soo bandhigayaa xagga sare ee daaqadda browser-ka. Luqadda caadiga ah waxaa lagu bedeli karaa goobaha barnaamijka Bing laftiisa, iyada oo ka badan saddex doorasho oo la heli karo. More »
Barnaamijka qoraalka ah ee aadka loo qiimeeyo ee loo yaqaan 'iOS', Day One wuxuu bixiyaa qaab muuqaal ah oo adag oo ay ku jiraan sahal sahal ah oo labada Dropbox iyo iCloud labadaba. Sii kordhinta Sharciga ee Safari ayaa si deg deg ah kuu soo diri kartaa links, text iyo content kale oo ka socda bogga hadda si toos ah joornaalkaaga adiga oo aan wax bedeleynin barnaamijyada ama ka tago fadhigaaga booqashada.
Iyadoo la raacayo barnaamijka caanka ah ee fiidiyowga ah, fidinta Evernote wuxuu kuu ogolaanayaa inaad adigu isku duubto oo aad la wadaagto boggaga shabakada farta farta markaad booqanayso Safari. Xitaa waxaa la siiyaa awoodda aad u dooratid buug gaar ah si aad u keydiso clip, haddii aad doorato inaad sidaa yeelato. Sida dheeraadka ah ee dheeraadka ah ee iOS 8, waxaad u baahan tahay inaad u saxiixdo Evernote waayo sifooyinkaas si aad u shaqeyn kartid. More »
Soo hel Promo
Waxaa lagu rakibay barnaamijka Promofly, kordhinta tallaabadani waxay ku xireysaa oo si toos ah u soo ceshataa qawaaniin xayeysiis ah oo ku yaala goobta aad hadda ku iibsaneyso. Ka dalbashada inaad u saxiixdo App Promofly kahor intaa la isticmaalin, helitaanka Promo awood u leh inuu kuugu keydsado lacag aad u badan inta aad ka iibsaneyso qalabkaaga iOS.
Kordhinta Tani, oo aad u baahan tahay in laguugu galo xisaabtaada, wuxuu kaydiyaa bogga internetka ee tuubada kaliya ee bogga Instapaper ee ku yaal Safari's Share Share. Tani waa mid ka mid ah fududaha, laakiin sidoo kale waxtarka ugu weyn ee liistada leh ee kaydinta walxaha internetka ee isticmaalka mustaqbalka. More »
Markaad xasuusato dhammaan ereyada sirta ah waxay noqotaa mid aad u badan oo lagu xalliyo, adeegyada sida LastPass waxay cadeyn karaan qiimo weyn. App app wuxuu ku yimaadaa Safar Action ah, kaas oo buuxin kara ereyada badbaadada ee internetka sida loo baahdo. Waxaad u baahan tahay inaad gasho barnaamijka LastPass si aad u isticmaasho kordhintaan, waxaana sidoo kale laguugu yeeri doonaa inaad ku xaqiijiso farahaaga marka aad marka hore bilaabeyso kordhinta Safari dhexdeeda. More »
Ku soo dir Iskuulka
Mid ka mid ah feejignaanta shakhsi ahaaneed, kordhinta tallaabadani waxay si toos ah u direysaa cinwaanka iyo URL ee bogga firfircoon ee shabakadda cinwaanka emailka loogu talagalay. Mar dambe maahan inaad furto macaamilka Boostada ama aad sameysatid email rasmi ah. Ka dibna ku dhufo icon kordhinta 'icon' oo aad sameyso! Ka hor intaan la isticmaalin kordhintaan, si kastaba ha ahaatee, waa in aad adareesaa cinwaanka emailkaaga gudaha Boostada Gaarka ah - taas oo ay ku jirto codsashada iyo soo galida lambarka xaqiijinta. More »
Taageerayaasha Microsoft OneNote waa inay ku raaxaystaan ​​kordhinta, taas oo kuu ogolaaneysa inaad bogga internetka ku qorto buugaaga la doortay iyo qaybta - bedelaya cinwaanka iyo ku dallacida qoraalada dheeraadka ah haddii aad rabto. Ma aha oo keliya URL-ka bogga ee la keydiyay, sawir horay loo qaaday ayaa lagu daray. Tilmaamahan, marka laga reebo sawirka, ayaa sidoo kale laga heli karaa habka offline. More »
Isticmaalayaasha Pinterest waxay jecel yihiin biinanka kaydka u gaar ah boorsadooda shakhsiyeed ama kooxeed, ururinta iyo wadaagaan wax kasta oo ka socda cuntada dhadhan fiican leh si ay u dhiirrigeliyaan farshaxanka farshaxanka marka ay fiiriyaan Webka. Waxaa ku yaal khadka Fadhiyada Khadka La wadaago, fidinta Pinterest wuxuu kuu ogolaanayaa inaad 'u xoqdo' guddiga xulashadaada adiga oo aan ka bixin barnaamijka Safari. More »
Barnaamijka Pocket wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku kaydiso maqaallo, videos iyo dhamaan bogagga Webka ee hal meel. Markaa kadib ayaad dib u eegi kartaa waxyaabahan soo socda qalab kasta oo jeebka ku rakiban. Iyada oo fidinta booska Pocket-ka ee Safari, Macluumaadka Webka ee aad hadda daawaneyso si toos ah ayaa loo keydiyaa isla marka aad doorato astaanta. More »
Faahfaahin kale oo dheeraad ah, TranslateSafari ayaa boggeeda internetka ku gudbisa xulashadaada Bing ama adeega turjumaadda Google ee luqad kasta oo aad doorato tuubada badhanka. Marka lagu daro qoraalka tarjumaadda, kordhintaan waxay sidoo kale bixisaa si ay u akhrido bogga ku jira maqalka cod dheeraada. Inkasta oo luqado badan loo heli karo qaabka hadalka, dhammaantood waxay u baahan yihiin in lagu iibsado app marka laga reebo Ingiriisi codka dumarka ah. More »
Kordhinta Tani waxay tahay ilaahyo loogu talagalay barnaamijka Tumblr ee firfircoon ee isku daya inuu booqdo socodka, si joogta ah ula wadaagno akhristeyaashooda maaddaama ay xayeysiinayaan. Xulashada Tumblr icon ee Safari's Share Share ayaa si toos ah u abuuraya boostada bogga internetka ee hadda, kuu ogolaanaya inaad ku darto safkaaga ama aad daabacdo si aad ugu noolaato microblogkaaga. Ka hor intaan la isticmaalin faahfaahinta dheeraadka ah waa inaad marka hore xaqiijisaa gudaha Tumblr lafteeda. More »
View Source, waxaa laga helaa safka Fiidka Waxyaabaha Safarka ee Safari ee Share-ka, wuxuu muujiyaa koodhka source-qaabeysan ee bogga firfircoon ee daaqada cusub. Hantida Hantida , oo ku taal dhinaca hoose ee daaqada, waxay ku taxdaa dhammaan sawirrada, isku xirnaanta iyo qoraallada ku qoran boggaan oo dhan. Kumbiyadaha kale ayaa kuu oggolaanaya inaad aragto burbur ku saabsan boggaga DOM ee bogga, ku dur imow jadwalka imtixaanka joornaalka hadda oo aad aragto faahfaahinada ay ka mid yihiin baaxadda bogga, qaabka caanka ah iyo keegyada. More »
Wakhtigan xaadirka ah ee dhaqdhaqaaqa ee maanta jira, waa in la abaabulo waa in ay ahaato. Tani waa meesha barnaamijka Wunderlist uu iftiimiyo, oo bixinaya awooda lagu abuurayo, lagu hayo, loona wadaago qorshooyinka iyo liisaska oo ka bilaabma qaddiyada aad u baahan tahay inaad dhammeysato maanta ama waxyaabaha aad u baahan tahay inaad ka iibsato dukaanka. Dhererka Safarka Sharciga ah, ayaa sidoo kale, kuu ogolaanaya inaad ku darto bogga firfircoon ee internetka (cinwaanka, URL, sawirka iyo wixii faahfaahin ah ee aad rabto inaad ku darto) liiska shakhsi ahaaneed ee Wunder adigoo laba farta farta. More »
Talooyinka Playlist ee YouTube
Raadi oo daawee filimyada iyo TV-ga bandhigga Yidio Online
The Best Browsers ee iPad ah
"Qolka Naqshad," Guriga Qurxinta Dhexdhexaadinta gudaha
Yahoo - Rasmiga Rasmiga ah ee Shabakada Web Download
Tilmaamaha ugu fiican ee "Pomodoro Timer Apps" iyo "Tools Online"
Dib u eegista Panasonic DMP-BDT330 3D Sawirada Blu-ray Disc Player
Tilmaamaha Hagaha ee Orange Color
Baro Wanaagga ugu Fiican ee Beddelka Caddadka ee Word 2007
Sida loo Isticmaalo InPrivate Browsing ee Internet Explorer 8
Waxyaabaha loo yaqaan "Internet" iyo "Network Backbones"
Sida loo leexiyo iTunes Genius iyo Genius Sidebar
Waa maxay sababta aad u daryeeli lahayd sida / Click Click khiyaamo
Sidee loo dardar geliyaa ciyaaraha Android
Sida looga fogaado Kaadiiga Carbon Monoxide ee baabuurkaaga
Fedora GNOME Kombiyuutarada Gaaban-yar
Sidee loo Bixiyaa Xidhiidh Khasab ah iyada oo aan Laheyn
Sida Loo Helo Lacagta App Mobile App
Sidee loo galiyaa Bogga Goobta ee Dukumentiga Sawirka ah ee Ereyga
Sidee loo badbaadin karaa iPad-gaaga qoyan
Gifts for Apple Users
Ku noqo Qalabka Qalabka Bulshada ee Tababarka FACE
Waa maxay sababta 10.0.0.2 IP Address loo isticmaalo